China Diesel Firefighting mgbapụta na-emepụta na suppliers | KAIQUAN
Ewu na kpo oku
XBC usoro diesel engine pump pump bụ ọkụ mmiri na-enye akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ọkọlọtọ ọkụ mba mba GB6245-2006 si dị. A na-ejikarị ya eme ihe na sistemụ ọkụ ọkụ nke mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, gas nkịtị, osisi ike, wharf, ọdụ gas, nchekwa.
XBC usoro diesel engine pump pump bụ ọkụ mmiri na-enye akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ọkọlọtọ ọkụ mba mba GB6245-2006 si dị. A na-ejikarị ya eme ihe na sistemụ ọkụ ọkụ nke mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, gas nkịtị, osisi ike, wharf, ọdụ gas, nchekwa, ụlọ dị elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ubi. Site na ngalaba nyocha iru eru ngwaahịa ọkụ (asambodo) nke ngalaba nchịkwa mberede, ngwaahịa a eruola ọkwa na China.
Enwere ike iji mgbapụta ọkụ ọkụ Diesel bufee mmiri dị ọcha na-enweghị ihe siri ike dị n'okpuru 80 ℃ ma ọ bụ mmiri mmiri nwere anụ ahụ na kemịkalụ yiri mmiri. Na ebumnuche nke izute ọnọdụ ọkụ ọkụ, a ga-atụle ọnọdụ ọrụ ọrụ nke ụlọ na mmepụta mmiri. E nwere ike iji ọkụ ọkụ mmanụ dizel ọkụ XBC ọ bụghị naanị na sistemụ ọkụ ọkụ nwere onwe ya, kamakwa na usoro inye mmiri maka ọkụ ọkụ na ndụ, kamakwa na usoro mmiri iji wuo, ọchịchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwu ala, inye mmiri na mmiri, ụgbọ mmiri, ọrụ ubi na oge ndị ọzọ.
- rangedị ụdị ụdị dị iche iche: otu ogbo otu mmiri na-agbapụta centrifugal, mgbapụta mpempe akwụkwọ ntanetị, otu mgbapụta okpukpu abụọ, a na-ahọrọ mgbapụta ogologo ogologo na ụdị mgbapụta ndị ọzọ maka otu, yana ọtụtụ usoro na nrụgide.
- akpaka ọrụ: mgbe mmiri mgbapụta unit na-enweta ime akara iwu, ma ọ bụ isi ike ọdịda, electric mgbapụta ọdịda na ndị ọzọ na (mmalite) n'ókè, unit ga-amalite na-akpaghị aka. Akụrụngwa ahụ nwere usoro mmemme mmemme na-akpaghị aka, nnweta na ngosipụta data akpaka, nchoputa na-akpaghị aka na nchebe.
- Ngosipụta nhazi usoro: gosipụta ọnọdụ dị ugbu a na oke nke akụrụngwa dịka ọnọdụ ọrụ ọrụ nke ugbu a dị. Ngosipụta ọnọdụ gụnyere mmalite, ọrụ, ọsọ ọsọ, ịgbada ọsọ ọsọ, (na-abaghị uru, ọsọ zuru oke) mmechi, wdg. Usoro nhazi gụnyere ọsọ, nrụgide mmanụ, ọnọdụ mmiri, ọnọdụ mmanụ, batrị batrị, oge ọrụ na-agakọ, wdg.
- Ọrụ mkpu: bido mkpu mkpuchi, mkpu mkpuchi mmanụ na mmechi mkpọchi, mkpu mmiri dị elu, mkpu mmanụ ọkụ dị elu, mkpu mkpu batrị dị ala, mkpu ọkwa ikuku dị ala, mkpu mkpuchi na mkpuchi.
- startingdị mmalite dị iche iche: akwụkwọ ntuziaka na saịtị na-amalite ma na-akwụsị njikwa, ịmalite ịmalite na ịkwụsị njikwa nke ebe njikwa, ịmalite ma na-agba ọsọ na ike ọkụ.
- Ngosipụta nzaghachi ọnọdụ: ngosipụta ọrụ, mmalite ọdịda, mkpu zuru oke, njikwa ike njikwa na akara ngosi nzaghachi ọnọdụ ndị ọzọ.
- Automatic Nchaji: na nkịtị na njikere, akara usoro ga-akpaghị aka ise n'elu-ebubo batrị. Mgbe akụrụngwa na-agba ọsọ, onye na-enye ihe ọkụ ọkụ nke mmanụ dizel ga-agba batrị ya.
- workinggba ọsọ na-agbanwe agbanwe: mgbe mmiri na isi nke mgbapụta mmiri na-ekwekọghị na ihe achọrọ, a ga-agbanwe ọsọ ọsọ nke mmanụ dizel.
- Igwe batrị batrị abụọ: mgbe otu batrị ịmalite, ọ ga-agbanwe na batrị ọzọ na akpaghị aka.
- Mmezi free batrị: ọ dịghị mkpa ka ịgbakwunye electrolyte ugboro ugboro.
- jaket mmiri tupu kpo oku: otu dị mfe ịmalite mgbe ọnọdụ ikuku dị ala.
Ọsọ: 990/1480/2960 rpm
Ike iche: 10 ~ 800L / S
Nsogbu nrụgide: 0.2 ~ 2.2Mpa
Mgbanwe ikuku ikuku:> 90kpa
Ọnọdụ ikuku: 5 '~ 40'
Ikwu iru mmiri nke ikuku: ≤ 80%
Nke gara aga: XBD Series Vetikal Long Axis Firefighting mgbapụta
Osote: A na-ahụ maka Akụrụngwa W Searị
Ngwongwo Mmiri Dizel Na-alụso Mmiri
Nfuli mgbapụta Diesel Marine Fire
Mkpụrụ mmanụ dizel maka sistemụ ọgụ ọkụ
Fire Na-alụ ọgụ dizel Water mgbapụta
KZJXL Series Submerged slurry nfuli
Ihe ngosi KQTL Series
A na-ahụ maka Akụrụngwa W Searị
XBD Single Stage Fire mgbapụta